Bit By Bit - Ukubuza imibuzo - 3.6 Surveys kwamanye data
Ukunxulumanisa uphando nezinye oovimba bedatha ikwenza ukuvelisa uqikelelo ukuba akunakwenzeka ngenye indlela.
Uninzi iisaveyi kuma-wedwa, iinzame noziqulathe-. Abayi kwakha phezu omnye komnye kwaye abalixhakamfuli zonke ezinye data ekhoyo ehlabathini. Oku kuzakuthsintsha. Kukho kakhulu ukuba kungafumaneka ngokunxulumanisa data zesaveyi kweminye imithombo yedatha, ezifana data umkhondo yedijithali kuchaziwe kwiSahluko 2. Le ukukwazi ukukhonkca iisaveyi namanye data nje Iphawula yokuba ukubuza kwaye ukubukela izinto ngokugqibeleleyo kungekhona.
Ingakumbi, ndiza ukwahlula phakathi iindlela ezimbini ezahlukeneyo zokuhlanganisa kubuza no ngokujonga: ndikubuza ziyanyuswa yatyeba ecela (Figure 3.10). Ekuceleni Amplified, le imizila lwedijithali bengengabo nayiphi na inxaxheba ngqo ngaphandle ubuchule babo ukunceda lokuzikhuphela ixabiso ngakumbi idatha yesaveyi. Ekuceleni aphuculweyo, kwelinye icala, intwana yedijithali eneneni umlinganiselo ongundoqo umdla idatha yesaveyi yakha nemeko eyimfuneko ngeenxa zonke.
Umboniso 3.10: iindlela ezimbini eziphambili ukudibanisa imizila yedijithali kwaye idatha yesaveyi. Ekuceleni ziyanyuswa (Icandelo 3.6.1) le imizila yedijithali zisetyenziswa kwiziphakamiso idatha yesaveyi. Ekuceleni aphuculweyo (Icandelo 3.6.2) na imizila yedijithali okunene nomlinganiselo ongundoqo umdla idatha yesaveyi yakha nemeko eyimfuneko ngeenxa zonke.